Karazany varim-bazaha | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Karazany varim-bazaha
Bordeaux miora: fitsipika fiasana, fiomanana sy torolàlana ampiasaina
Ny bikan'ny Bordeaux dia nahazo ny anarany teo amin'ny toerana nahaterahany - tanànan'i Bordeaux. Ao Frantsa, ity rano ity dia nampiasaina tamim-pahombiazana nanomboka tamin'ny taonjato faha-19. Ny famolavolana Bordeaux dia afaka miomana amin'ny tenanao manokana. Amin'ity lahatsoratra ity, hianatra ny fomba hanaovana izany ianao, ny fomba hanolorana ny mixo Bordeaux, ny fomba fampiharana azy sy ny fepetra fiarovana.
Karazana "Shantane 2461": famaritana sy fambolena
Ny karaoty "Shantane 2461" dia efa anisan'ireo karazana tsara indrindra karazana. Manana ny toetran'ny mpitarika, ity karazany ity dia nanangona ny endri-javatra rehetra amin'ny vokatra azo tsapain-tanana: tsiro mahafinaritra sy fofona, endrika mahafinaritra, rendrarendra avo, habetsaky ny fampiasana. Hodinihina ato amin'ity lahatsoratra ity ireo karazana fitandremana, famaritana ny karazany, ny tombony sy ny tsy fahampian'ny vahiny frantsay.
Karazany "Samson": famaritana, famolavolana ary fikarakarana
Anisan'ireo karazana karoty izay malaza amin'ny tsenam-ponenana, dia tsy lavitra ny farany i Samsona. Nisarika ny sain'ny mpamboly izy noho ny tsirony tsara sy ny kalitaony. Andao isika hijery akaiky kokoa ny famaritana sy ny toetran'ny fotony.
Carrot "Nantes": famaritana, fambolena ary fiahiana
Carrot "Nantes" - patriarika efa 80 taona, izay nanaporofo ny tenany teo amin'ny sehatry ny Firaisana Sovietika teo aloha. Ny vary dia nahazo ny mpamboly Sovietika tamin'ny taon-jato faha-40. Ity plastika ity dia namboly tany atsimon'i Krasnodar sy tany am-pandriana any amin'ny faritra Irkoutsk - ary na aiza na aiza, dia faly ireo mpamboly amin'ny fambolena.
Karazana voankazo marevaka
Ny karazana volon-koditra tsy mahazatra dia mahazo laza. Andeha hiezahantsika hamantatra hoe inona, ankoatra ny loko fotsy, dia tsy mitovy amin'ny karazana karoty misy karazany mahasoa sy mety tsy mahafinaritra izany. Manomboka amin'ny fomba fijery ny botany dia karazana volomparasy volomparasy mitovy amin'ny karazana mahazatra (Daucus carota subsp.
Vita Long karazana varimbazaha avo dia avo
Samy manao ny fangatahan'izy ireo amin'ny toetra sy ny toetran'ny legioma ny tsirairay: Ny zava-dehibe amin'ny olona dia zava-dehibe ny fanandramana, ny fitazonana kalitao dia zava-dehibe amin'ny olona, ​​endrika ary loko manankarena amin'ny olona iray. Izany rehetra izany - ireo fepetra ahafahanao mivezivezy amin'ny fisafidianana mari-pahaizana. Ny karazana karazany rehetra dia karazana varimbazaha valo: "Amsterdam", "Nantes", "Flaccus", "Shantenay", "Berlikum", "Mini-carrot", "Carrot Parisian" ary karazana karazany.
Mpanjakavavin'ny fararano: karazana karazana karazana
Androany dia hampahafantarintsika ny karazana karaoty mahafinaritra antsoina hoe "Mpanjakavavin'ny Fahavaratra". Maro ireo karazana manana toetra tsara, saingy ny "Mpanjakavavy amin'ny Herin'ny Avo" dia heverina ho iray amin'ny tsara indrindra amin'ny fitomboan'ny toetr'andro sy hafanana. Hianatra ny fomba hamafy tsara ianao fa mila karaoty ho an'ny fitomboana tsara sy ny fampandrosoana, ary koa manana toetra mahavariana amin'ny karazana.
Tushon isan-karazany ny karazany
Ny vozona dia legioma malaza, malaza ary mahasalama. Ankehitriny dia misy karazany maromaro misy karazany samihafa. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny karazana karazany Tushon isika, dia hanome ny famaritana azy, toro-hevitra momba ny famafazana sy ny fikarakarana, sary iray izay hitombo raha manaraka ny fanoloran-kevitra. Famaritana sy sary "Tushon" dia karazana karoty efa voalamina.
Ny voankazo mahavokatra indrindra: vary varimbariana Canada Karbaona F1
Ny karazana "Canada F1" dia efa misy amin'ny sehatra maro samihafa, satria, araka ny voalaza, ny karazany dia manambatra ny tsirony mahafinaritra amin'ny fahaterahana ary tena tsara ho an'ny toetr'andro sy ny toetr'andro ao amin'ny faritra afovoany. Ary na dia zaridaina manana traikefa goavana aza dia hahita ity karôta ity ho fanampim-pahavaratra amin'ny fambolena hafa ao amin'ny zaridainy.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Karazany varim-bazaha